बेलकामा फोहर व्यवस्थापन गरि प्राङगारिक मल उत्पादन गरिने, उद्याेग उद्घाटन » Khabarbit
दैनिक ५ टनसम्म मल उत्पादन गर्न सकिने
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १२:५१
उदयपुर । बेलका नगरपालिकामा फोहर व्यावस्थापन तथा प्रांगारिक मल निर्माण गर्न उद्योग उद्घाटन गरिएको छ ।
बेलका नगरपालिका–९ को धौरी खैरेनीमा स्थापना भएको उद्योगको भूमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मदन भण्डारी फाउण्डेसन प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष गोपाल गुरागाईले उद्घाटन गरेका छन् ।
रिसोर्स एण्ड चेन्ज आर.सि.एम. प्रालिको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा उद्योग निर्माण भएको हो । उद्योगको उद्घाटन पश्चात फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रांगारिक मल उत्पादनको परीक्षण समेत भएको थियो ।
बेलकामा वितरण हुन लागेको ऐलानी जग्गालाई नम्बरी बनाएर धनी पुर्जा वितरण हुन लागेको अध्यक्ष गुरागाईले बताए । समृद्ध बेलका निमार्णमा नगरले ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ । बेलका नगरपालिकामा गौरवको योजना सञ्चालन भएसँगै स्थानीय रोजगार प्राप्त भएको उनले बताए ।
स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीले पुरा गर्न लागि परि रहेको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए ।
उद्योगले दैनिक ५ टनसम्म मल उत्पादन गर्न सक्ने रिसोर्स एण्ड चेन्ज आर.सि.एम. प्रालिका सञ्चालक डाक्टर प्रेम थापाले जानकारी दिए । उद्योगमा घर तथा घर बाहिरका फोहोरहरु ल्याएर जैविक मल तथा ग्यास निमार्ण गर्न सकिने उनले बिताए ।
बेलका, चौदण्डी र छिमेकी जिल्ला सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका फोहोरहरुलाई प्रशोधन गरेर मल तथा ग्यास निमार्ण गर्न सकिने लक्ष्य रहेको थापाको भनाइ छ । सो क्षेत्रमा पर्यटनको समेत विकास गर्न सकिने बेलका नगरपालिका–९का वडाध्यक्ष मोहन घिमिरेले बताए ।
ट्याग प्राङगारिक मलबेलकाबेलका नगरपालिका
लकडाउनले रोजगारी गुमेपछि ‘हस्तकला’ सुरु गरेका रामकुमार भन्छन्-‘बजारकाे पर्खाईमा छु’
उदयपुर । बेलका नगरपालिकाका मेयर...
कृषिबालीमा रोग किरा बढेसँगै बेलकामा घुम्तीबाली उपचार शिविर सञ्चालन
उदयपुर । बेलका नगरपालिकाका किसानहरुले...
सहयोग बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम गर्ने
प्रविन बेडवालको ‘मुटु भित्रै राख्छु तिमीलाई' सार्वजनिक (भिडियोसहित)